Dreame H11 Qoyan oo qallalan, falanqayn qotodheer | Warka gadget
Miguel Hernández | 28/12/2021 10:59 | General, Reviews
Aniga ayaa igu riyooday ayaa weli ah mid ka mid ah shirkadaha bixiya saamiga tayada / qiimaha ka wanaagsan ee qaybta nadiifinta guryaha smart, gaar ahaan haddii aan ka hadalno nadiifiyeyaasha vacuum, robots iyo qalabyada kale ee diiradda saaraya fududeynta nolosheenna marka ay timaaddo nadiifinta gurigayaga. .
Markan waxaan si qoto dheer u eegi doonaa H11 cusub oo qoyan iyo qallalan, nadiifiye vacuum ah kaas oo si qoto dheer u xoqaya oo xoqaya hal baas. Waxaan ku tusineynaa alaabtan cusub ee Dreame waxaanan kuu sheegaynaa khibradayada isticmaalka joogtada ah ee alaabtan taas oo kacday qayb aan badneyn oo beddelaad ah la bixiyo.
2 Waxyaabaha ku jira xirmada iyo awoodaha
3 Tilmaamaha farsamada iyo khibrada isticmaalaha
Markaad sharad ku gasho calaamada Dreame oo kale, waxa aad hore u garanaysay waxa laga filayo dhinaca nashqadaynta iyo agabkaba, waxa lagu gartaa dhammayn wanaagsan iyo balaastiig iftiin laakiin adkaysi u leh kuwaas oo inta badan alaabteeda siisay shakhsiyad aan la qiyaasi karin, mana ay ahayn ka yarow nadiifiyaha cusub ee H11, kaas oo aan si dhakhso ah ula xiriiri karno astaanta Aasiya marka la eego. Cabbirrada ayaa aad loogu dhawaaqaa, tanna waxaa weheliya culeyska guud ee agagaarka 4,7 kg ee jirka oo aad loo buunbuuniyay.
Qalabkan cajiibka ah wuxuu ku ahaan karaa kaaga qiimaha ugu fiican
Raaxada ma guulaysanayso, taasi way caddahay, si kastaba ha ahaatee rollerskeeda iyo awooda burushka ayaa noo fududayn doona inaan samayno baasaska. Soo-dejintu way ka yara dhib badan tahay, sidaa awgeed waxa lagu darayaa dallacaadda iyo saldhigga is-nadiifinta oo ku yaalla dhulka. Dhab ahaantii ma eegin nooca ugu fudud iyo badeecada ugu badan, si kastaba ha ahaatee, waa in aan xisaabta ku darnaa ujeedooyinka Dreame H11, oo ka fog nadiifinta iftiinka iyo caadiga ah, halkii diiradda lagu saari lahaa meelo waaweyn iyo meelo badan oo la heli karo. Waxaas oo dhan waa in aan xisaabta ku darnaa ka hor intaanan sii wadin iibsashada.
Waxyaabaha ku jira xirmada iyo awoodaha
Si ka fog waxa ay u ekaan karto, Dreame H11 waxa ay ku timaadaa xirmo is haysta, gacanta aluminiumku waa mid fudud oo la saari karo, marka lagu daro noo ogolaanaysa inaan maareyno shaqeynta faakuumka nadiifiyaha leh badhamada taabashada wanaagsan. Jirka leh matoorka, xaaqinka iyo labada taangiyada biyaha ayaa si toos ah loogu dhejiyaa sanduuqa, dhammaan qaybaha xirashada iyo dayactirka waa la saari karaa, sida had iyo jeer ku dhacda Dreame. Nidaamka "guji" waxaanu ku dhejin doonaa gacanta waxaanan yeelan doonaa Dreame H11 si buuxda la isugu keeno si aan ugu bilowno imtixaanada ugu horreeya.
Content ee xirmada sida aynu sheegnay waa arrin spartan, waxaan ka heli jidhka ugu weyn halkaas oo taangiga double, motor iyo xaaqinka, ku amraya iyo saldhig is-nadiifinta, wada jir ah ula adabtarada awoodda iyo nooc ka mid ah «burush» la. ku darida biyaha ama dareeraha nadiifinta oo naga caawin doona inaan nadiifinno haamaha biyaha. Qaybtan Dreame H11 waxay ina siinaysaa dareen wanaagsan, rakibiddu waa dhakhso oo uma baahnayn tilmaamo si aad u hesho. Waa in la ogaadaa in Dreame ay ku jirto dareere nadiif ah oo gaar ah oo aan dhawaan awoodi doono inaan si gaar ah u iibsano, inkastoo aan weli helin barta iibka.
Taasi waxay tidhi, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sababta aan ugu hadalno jamacada "Deposit", Tani waa sababta oo ah Dreame H11 waxay leedahay laba taangi oo kala duwan, mid ka mid ah biyaha wasakhaysan oo ah 500ml kaas oo ah midka laga helo xaaqinka hoose ee xaaqinka. iyo mid biyo nadiif ah oo 900ml ah Kaas oo mas'uul ka ah bixinta suufka dareeraha nadiifinta. Haanta biyaha wasakhaysan waa meesha ay iyaduna masuul ka tahay in ay buul ka dhigto wasakhda aynu nuugno.
Qaybta tilmaanta ee hawlaha sare waxay ina tusi doontaa labada nooc ee nadiifinta: Standard iyo Turbo. Si la mid ah, waxay nagu wargelin doontaa boqolleyda batteriga haray iyo haddii habka is-nadiifinta uu shaqeynayo waqtigaas, kaas oo loo baahan yahay inuu joogo goobta dallaca. Tani waa sida gacanta ku jirta waxaan ka heleynaa laba badhan oo xagga hore ah si ay u xakameeyaan awoodaha nadiifinta ee kala duwan, iyo mid ka mid ah qaybta sare ee gacanta oo mas'uul ka ah kicinta habka is-nadiifinta.
Tilmaamaha farsamada iyo khibrada isticmaalaha
Marka hore waxaan ka hadli doonaa ismaamulka. Dreame H11 wuxuu leeyahay batari 2.500 mAh ah kaas oo na siin doona ilaa 30 daqiiqo madax-bannaani qaab caadi ah, Tani si muuqata ayaa loo yarayn doonaa haddii aan tagno waxa Dreame u tixgeliyo qaabka turbo. Dhankeeda, nadiifiyaha faakuumku wuxuu leeyahay a 10.000 baasalka nuugista, wax yar ka hooseeya waxa ay ku bixiso aaladaha kale sida nadiifiyaha gacna ee ugu caansan, halkaas oo ay gaadhi karto ilaa 22.000, maadaama ay taasi buraashkeeda wareega ilaa 560 kacdoon daqiiqaddii Waxay kaa caawin doontaa inaad qabato wasakhda ugu badan ee isku duuban tani waxay u oggolaanaysaa aaladda inay la shaqeyso awoodaha nuugista hoose.
Dhankeeda, qaylada ayaa gaari doonta 76dB kaas oo sidoo kale aad uga hooseeya natiijooyinka ugu wanaagsan ee calaamaduhu awood u yeesheen inay ku bixiyaan qalabka kale. Faa'iido ahaan, waxaan haysanaa suurtagalnimada inaan ku iibsanno gudaha Amazon, oo leh dhammaan dammaanadaha ay tani keenayso.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aan helnay, oo ka baxsan miisaanka, waa dhumucda burushka, taas oo naga ilaalinaysa inaan ku hoos galno alaabta guryaha qaarkood, si la mid ah iyo xisaabtanka halka loo socdo Dreame H11, waxay noqon lahayd. xiiso leh in sidoo kale lagu daro iftiinka LED ee burushka. Dhankiisa iyo sida la fili karo. Natiijada parquet waa wax ba'an, biyaha xad-dhaafka ah waxay ka tagi doonaan calaamado muuqda, si kastaba ha ahaatee, tani waa badeecad si gaar ah loogu talagalay sagxadaha dhoobada, dhagaxyada iyo xitaa vinyl, halkaas oo natiijadu ay aad uga wanaagsan tahay.
Dreame H11 waa badeeco hal-abuur leh oo dejisa jaangooyooyinka la raacayo qaybta tixraac ahaan, inkasta oo ay leedahay dhibco aan la arki karin sida culeyska iyo gelitaanka adag ee alaabta guriga, waxay leedahay awood nuugid oo wanaagsan, qalab aad u fiican oo dhismo ah iyo dhameystir iyo waxay noo fududayn doontaa wax walba ilaa inta aynaan haysan dabaqyo parquet ama alwaax ah. Qiimaheedu waa agagaarka 320 euro ee dhibcaha iibka caadiga ah sida Amazon.
H11 qoyan oo qallalan
Ku dhejiyay: December 28 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: December 28 ee 2021
Qalabka si fiican loo dhammeeyey iyo dammaanad qaadka naqshadeynta
Quwad wanaagsan oo si fiican loo dhammeeyey
Way fududahay in la dhaqaaqo
Helitaanka xun ee alaabta guryaha hoose
Natiijooyinka xun ee parquet
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Dreame H11 Qoyan oo qallalan, si qoto dheer dib u eegis ku saabsan faakuumkan/xaaqadda